Global Voices teny Malagasy » Mahatsapa ny Hatezeran’ny #MeToo (#IzahoKoa) ny Lalàna, ny Fialamboly ary ny Politika · Global Voices teny Malagasy » Print
Mahatsapa ny Hatezeran'ny #MeToo (#IzahoKoa) ny Lalàna, ny Fialamboly ary ny Politika
Voadika ny 18 Avrily 2018 6:25 GMT 1	 · Mpanoratra Eunji Kim Nandika Ntsoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Ny Tetezana - The Bridge
Pikantsary avy amin'ny fandaharan'ny JTBC izay ahitana ny mpampanoa lalàna Seo Ji-Hyun (hita amin'ny sary eto) niampanga ny tsy fahaizana mitondra tena ara-nofo misy any amin'ny sampandraharaha ara-dalàna ao Korea Atsimo, ampiarahana amin'ny tenifototra #IzahoKoa (soratra niomerika eo amin'ny fàfana RGB modely-25) an'i Wolfmann (CC BY-SA 4.0). (Sary natambatr'i Georgia Popplewell).
Volana iray sarotra ho an'i Korea ny volana Febroary. Nanaovana ilay hetsika ara-panatanjahatena amin'ny andro ririnina lehibe indrindra erantany  tany amin'ny tanàna tatsinanana telo ahitana an'i Pyeongchang, izay nitondràna ireo atleta rehetra erantany hihomehy sy hitomany amin'ny lalaon'izy ireo izay niadiana tsara. Manerana ny firenena anefa, miatrika tolona hafa ireo Koreanina — ady iray maharitra, mananosarotra kokoa ary iadiany irery.
Raha vao niparitaka voalohany ny hetsika #IzahoKoa , nahemotrin'ny media Koreanina ny sampana “vaovao erantany” ao amin'izy ireo. Nidera sy nitsiriritra ireo fivoarana “avy any ivelany” ireo ny sasany, raha toa ka nijery toy ny vahiny kosa ny sasany. Niova anefa izany tamin'ny 29 Janoary.
Tamin'io andro io, niseho tamin'ny  Efitranom-Baovaon'ny fahitalavitra Koreanina JTBC ny mpampanoà lalàna Seo Ji-hyun ary nanambara fa niharan'ny sotasota ara-nofo  nataon'ny mpampanoa lalàna zokiny izy nandritra ny fandevenana iray tamin'ny taona 2010. nanamarika i Seo fa nampahitany masoandro io zava-nitranga io valo taona taty aoriana taorian'ny fahatongavan-tsaina fa tsy hisy mihitsy ny fiovàna raha mijanona amin'ny fahanginany ireo niharam-boina. Nanambara tranga fanolanana hafa nisy tao amin'ny fahefana fampanoavana lalàna ihany koa izy, izay nanamarihany fa tsy anjarany no miresaka ny antsipirihany. Nahatezitra mafy ny firenena ny fitantarana tamim-pitoniana sy feno fahatokisana nataon'i Seo, izay in-droa nahazo ny fankatoavana ministerialy tao anatin'ny 15 taona niasany ho mpampanoa lalàna.
Satria mbola nanafintohina ny firenena ny famoahana ny antsipiriany sy ny vaovao avy amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'i Seo, tononkalo iray izay navoaka tamin'ny volana Desambra 2017  mba hisarihana ny sain'ny vahoaka no nanaraka azy.
Maneho an-tsary ny fanararaotana ara-nofo ireo tanora mpanoratra izay ataon'ny mpanoratra iray antsoina hoe “En” ny “Goemul” nosoratan'ny poeta Choi Young-mi , izay midika hoe “biby mampahatahotra” amin'ny teny Koreanina. Any amin'ny faran'ilay tononkalo, miteny ny mpitantara fa voatondro hifaninana tamin'ny Loka Nobel ho an'ny Literatiora i “En”. Tonga dia nitodi-doha tany amin'ny poeta Ko Un  ny vahoaka, izay voatondro hifaninana amin'ny Loka Nobel ho an'ny Literatiora nandritra ny 15 taona nifanesy. Raha nanamarika i Choi fa vokatra literatiora iray ny “Goemul”, niseho kosa nanomboka teo ireo vehivavy maro ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny literatiora any Korea Atsimo, ka nanameloka an'i Ko ho tsy nahay nitondra tena ara-nofo efa amam-polo taona maro izay.
Niparitaka toy ny vanja ny #izahoKoa
Nanomboka niparitaka toy ny vanja ilay hetsika. Tonga avy eo ny fijoroana vavolombelona nataon'ny vehivavy iray mpilalao sarimihetsika, izay niampanga ny mpanatontosa sarimihetsika malaza, Kim Ki-duk, ho mpanolana . Narahana filazana mitovitovy amin'io izay nataon'ny vehivavy roa niampanga an'i Kim.
Ny ampamoaka hafa niampanga an'i Lee Yoon-taek,  tale artistika an'ny Yeonheedan, iray amin'ireo vondrona mpanao teàtra malaza ao Korea Atsimo, tamin'ny fitondrantena ara-nofo tsy mendrika. Satria mihamitombo ny fijoroana vavolombelona mivoaka, niala tsiny tamin'ny fitondrantenany i Lee nefa kosa nandà ny filazana fa nanolana.
Avy eo, ilay antsoina hoe “lehilahy jeren'ny olona 100 tapitrisa ” i Oh Dal-su  ao amin'ny firenena dia nandà aloha tamin'ny voalohany, avy eo nanaiky ireo filazana momba ny herisetra ara-nofo.
Roapolo no nijoro ho vavolombelona niampanga ilay mpilalao sarimihetsika Jo Min-ki  tamin'ny herisetra ara-nofo, izay mpampianatra ihany koa ao amin'ny Onivesite an'i Cheongju. Tamin'ny 9 Martsa, hita faty  tao amin'ny trano fonenany tany Seoul i Jo.
Niantso imasom-bahoaka an'i Jo Jae-hyun ilay mpilalao sarimihetsika, Choi Yul, izay niteny tamin'i Jo  tao amin'ny kaonty Instagram -ny hoe “niandry anao ho voatonona aho”. Nanaiky ny fahotany  ihany koa i Jo Jae-hyun ary nametra-pialana tao amin'ny Oniversite-n'i Kyungsung.
Nitarika ny talen'ny fikambanan'ireo Mpilalao sarimihetsika Koreanina, Choi Il-hwa  hibaboka ny tsy fahamendrehany ihany koa ny fiparitahan'ny #IzahoKoa — voalohany tao Korea izany hoe mpanao ratsy miteny alohan'ny hiampangana azy izany. Taorian'io, niteny ireo mpitatitra vaovao avy ao amin'ny haino aman-jery nasionaly KBS, nizara ny tantarany. Nitohy nipoitra tetsy sy teroa ireo tantara #IzahoKoa, nanasongadina mazava tsara ireo mpanao ratsy avy any amin'ny sehatra isankarazany ao Korea.
Niparitaka niainga tamin'ny fialamboly nankany amin'ny politika ilay fanentanana.
Tamin'ny farany, niparitaka tany amin'ny politika ireo ampamoaka #IzahoKoa, izay niantomboka tamin'ny fijoroana vavolombelona niampanga ny governoran'ny faritra Chungcheongnam taloha, i Ahn Hee-jung, izay tsy avy aiza akory fa avy amin'ny mpitantsorany ihany. Nametra-pialana haingana  i Anh izay noheverina fa ho kandidàn'ny antoko eo amin'ny fahefana amin'izao fotoana izao, mandritra ny fifidianana ho avy. Mazava ho azy fa nahemotrin'ny depiote, Jeong Bong-ju ihany koa ny tetikasany hilatsaka ho ben'ny tanànnan'i Seoul noho ny fiampangana miantefa aminy .
Nampiseho ny tsy fahavononan'ny Korea hiatrika tranga toa io ihany koa ny hafainganam-pandeha sy ny zavatra tratran'ilay ampamoaka.
Araka ny filazan'ny mpampanoa lalàna Seo izy tenany mihitsy, tsy manana fahalalahana manoloana ireo faneriterena araka ny lalàna ireo niharam-boina. Milaza ny andininy faha-307 ao amin'ny Lalàn'ny Heloka Bevava ao Korea Atsimo  (Fanalam-baraka) fa “tokony ho voasazy higadra…mandritra ny roa taona raha kely indrindra na amin'ny alalan'ny onitra ara-bola izay tsy mihoatra ny dimy tapitrisa Won”, ” ny olona iray izay manala baraka ny hafa amin'ny alalan'ny filazana tranga” — izay tsy voatery ho tranga diso loatra. Tsy nanolotra zavatra betsaka mba atao ho fiarovana ny fanohanan'ny fiarahamonina.
Tao anatin'ireo trangana fanararaotana ara-nofo 556 any amin'ny toeram-piasana notaterina tamin'ny taona 2016, iray ihany no nenjehin'ireo mpampanoa lalàna, ary 7 amin'ireo niharam-boina 10 no niala tamin'ny asany taorian'ny fanaovan'izy ireo ny tatitra. Teo anelanelan'ny taona 2012 sy 2016, 9 tamin'ireo fannafintohinana ara-nofo 2.109 ihany  no nasiana fanarahana, isa izay notsipihan'ny Komity ho an'ny Fanafoanana ny Fanavakavahana atao amin'ireo vehivavy (CEDAW) nandritra ny fotoana fivorian'ny komity ho an'ny tatitra ara-potoana faha-8 momba ny firenena.
Mitondra fiovana ao Korea Atsimo ny #IzahoKoa.
Mitondra fiovana miadana fa mahomby ao Korea Atsimo ny #IzahoKoa.
Nampiseho masoandro ny hasarotry ny olana izay nampanginina nandritra ny ampolo taona maro ny fivoaran'ny hetsika “IzahoKoa”. Nasehon'ireo ampamoaka ny fomba niparitahan'ilay olana tao anatin'ny fiarahamonin'i Korea Atsimo, izay fahiny ninia tsy hihaino ireo fanambaran'ny niharam-boina. Nasehony ihany koa ny ampahany be tazonin'ny fanjakàna ao anatin'ny resaka tsy fahaizana mitondra tena ara-nofo, sy hoe —na dia eo aza ny rafitra an-tanan-tohatra ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fahamatorana ara-tsaina — dia tena tsy azo ekena izany.
Fanohanan'ny fiarahamonina sy fianarana.
Niaraka tamin'ny tomanin'ireo niharan'ny #IzahoKoa, ny sasany nanatevin-daharana mba hanohana niaraka tamin'ny fitenenana hoe #MiarakaAminao, izay sady tany an-tserasera no teny an-dàlana. Naneho ny fanohanany ihany koa ireo mpilalao sarimihetsika , nanaraka izany dia izany ireo mpitarika politika.
Tamin'ny 26 Febroary, raha nanao ny fisamborana voalohany an'ilay mpanolana nantsointsoin'ny hetsika ny polisy, niantso ireo polisy  ny Filoham-pirenena Moon Jae-in mba “hanadihady fatratra” momba ireo filazana herisetra ara-nofo .
Herinandro teo ho eo taorian'izay, tamin'ny 7 Martsa, andro iray mialohan'ny hanamarihan'izao tontolo izao ny andiany faha 110 ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy , namoaka fanambaràna iray #MiarakaAminao ny filohan'ny Komisiona Nasionaly ho an'ny Zon'olombelona ao Korea, i Lee Sung-ho , ary nampiany fa hanitatra ny fanadihadiana ofisialy momba ny herisetra ara-nofo izay mamàka ao anatin'ny tsy fifandanjan'ny fahefàna ilay komisiona.
Mandritra izany fotoana izany, manabe ny vahoaka ihany koa ilay hetsika #IzahoKoa. Notsipihan'ny feom-bahoaka fa tsy tokony hiaran'ny fanararaotana amin'ny endriny hafa ireo niharam-boina izay navoaka ny momba azy. Nisy ny tolokevitra  ho an'ny fomba fitaterana izany olana izany any anaty haino aman-jery. Sady tsy angano tantaraina fotsiny ireny fijoroana vavolombelona ireny — fa zavatra niainana niaretan'ireo olona tena olona.
Iray volana mahery izay no lasa raha niteraka ny #IzahoKoa tao Korea ny fijoroana vavolombelona nataon'i Seo Ji-hyun. Nanokatra ny làlana sy niteraka fakàna bahana ho amin'ny fiovana ny hamaroan'ireo fijoroana vavolombelona mahery vaika. Mbola ho jerena hoe ahoana ny fomba hitohizan'ilay hetsika, kanefa misy antony tokony hanantenana. Nanatri-maso ny herin'ny vahoaka ry zareo Koreanina. Mbola vao mafana ao anatin'ny lohan'ny vahoaka ny fahatsiarovana ilay fiaretantory niaraka tamin'ny labozia teo amin'ny Kianja Gwanghwamun tao Seoul  nandritra ny andro Asabotsy maro sy ny mety ho fandroahana ny filoham-pirenena Park Geun-hye  tamin'ny Martsa lasa teo.
Antso ho any amin'i Korea tsaratsara kokoa ilay hafatra, toy ny amin'izao fotoana izao. Maka ny endrika #IzahoKoa sy #MiarakaAminao izy amin'ity indray mitoraka ity fotsiny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/18/116210/
 hetsika ara-panatanjahatena amin'ny andro ririnina lehibe indrindra erantany: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Winter_Olympics
 niseho tamin'ny: https://www.aprilmag.com/2018/02/06/the-prosecutor-who-exploded-metoo-in-korea-the-jtbc-interview-with-seo-ji-hyun/
 niharan'ny sotasota ara-nofo: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180130000855
 tononkalo iray izay navoaka tamin'ny volana Desambra 2017: http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3044351
 Choi Young-mi: https://en.wikipedia.org/wiki/Choi_Young-mi
 Ko Un: https://en.wikipedia.org/wiki/Ko_Un
 niampanga ny mpanatontosa sarimihetsika malaza, Kim Ki-duk, ho mpanolana: https://www.theguardian.com/film/2018/mar/07/three-woman-accuse-korean-director-kim-ki-duk-rape-assault
 Lee Yoon-taek,: http://variety.com/2018/legit/asia/korea-metoo-stage-director-lee-yoon-taek-accused-of-rape-1202707408/
 lehilahy jeren'ny olona 100 tapitrisa: http://www.modernkoreancinema.com/2015/01/oh-dal-soo-is-100-million-viewer-man.html
 Oh Dal-su: https://en.wikipedia.org/wiki/Oh_Dal-su
 Jo Min-ki: https://en.wikipedia.org/wiki/Jo_Min-ki
 hita faty: https://www.theguardian.com/film/2018/mar/09/jo-min-ki-south-korea
 niteny tamin'i Jo: https://www.soompi.com/2018/02/22/actress-choi-yul-opens-jo-jae-hyuns-sexual-harassment/
 kaonty Instagram: https://www.koreaboo.com/news/actress-accused-jo-jae-hyun-sexual-harassment-death-threats/
 Nanaiky ny fahotany: https://www.soompi.com/2018/02/25/jo-jae-hyun-resigns-professorship-admission-sexual-harassment/
 Choi Il-hwa: https://www.soompi.com/2018/02/25/choi-il-hwa-admits-sexual-harassment-removed-drama-university/
 Nametra-pialana haingana: https://www.theguardian.com/world/2018/mar/06/south-korean-politician-steps-down-after-accusations-ahn-hee-jung
 fiampangana miantefa aminy: https://tech2.org/korea/former-rep-jeong-bong-ju-suspected-of-sexual-harassment/
 ny andininy faha-307 ao amin'ny Lalàn'ny Heloka Bevava ao Korea Atsimo: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=28627&lang=ENG
 9 tamin'ireo fannafintohinana ara-nofo 2.109 ihany: http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=103&oid=214&aid=0000813482
 Naneho ny fanohanany ihany koa ireo mpilalao sarimihetsika: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180304000194
 niantso ireo polisy: https://www.reuters.com/article/us-southkorea-metoo/south-koreas-moon-urges-action-against-growing-metoo-sex-abuse-claims-idUSKCN1GA0XT
 Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Women
 namoaka fanambaràna iray #MiarakaAminao ny filohan'ny Komisiona Nasionaly ho an'ny Zon'olombelona ao Korea, i Lee Sung-ho: http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/03/07/0200000000AKR20180307122800004.HTML?input=1195m
 Nisy ny tolokevitra: http://www.huffingtonpost.kr/entry/story_kr_5a9659a0e4b07dffeb6d93c1?utm_id=naver
 ny fahatsiarovana ilay fiaretantory niaraka tamin'ny labozia teo amin'ny Kianja Gwanghwamun tao Seoul : https://www.nytimes.com/2016/11/26/world/asia/korea-park-geun-hye-protests.html
 Park Geun-hye: https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Geun-hye